အလက်ဇန္ဒား ဖလင်းမင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(1881-08-06)၆ ဩဂုတ်၊ ၁၈၈၁
၁၁ မတ်၊ ၁၉၅၅(1955-03-11) (အသက် ၇၃)
Lysozyme အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း
en:Knight Bachelor (1944)
en:Cameron Prize for Therapeutics of the University of Edinburgh (1945)
↑ "Alexander Fleming 1881–1955" (1956). Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 2: 117–126. doi:10.1098/rsbm.1956.0008.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အလက်ဇန္ဒား_ဖလင်းမင်း&oldid=717881" မှ ရယူရန်
၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။